Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabatay
Ku-xigeenka ra'iisul-wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibedda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya marwo Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa maanta dalka dib ugu soo labatay kadib markii ay ka soo qeyb gashay shirkii golaha Amaanka ay ku yesheen dalka Mareykanka.
Wasiirka arrimaha dibada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo magaalada Washiton DC uga soo qeyb gashay shirkii ay yesheen golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa saxaafadda ugu warbixisay waxyabihii looga hadlay shirkii ka dhacay dalka Mareykanka.
Waxa ayna sheegtay in kulanka looga hadlay arimo badan oo quseeyo Soomaaliya sida in dib cunaqabateynta hubka laga qaado dalka, in la dhiso ciidamada badda si ay xeebaha dalkeena uga uga ilaaliyaan burcad badeeda iyo beylahda, dhismaha ciidan milatari iyo in dib u eegis lagu sameeyo howlgalka milatari oo ay wadaan ciidamada midowga africa ee AMISOM.
Shirkii golaha amaanka ee Qaramada Midoobay oo ay ka soo qeyb gashay wasiiradda arrimaha dibada oo ay ka soo baxeen qodobo muhiim u ah dalkeena ayna ka mid tahay qaadista cunaqabatenta hubka ayaa hadii ay suurta gashay waxa ay wax weyn ka badali doonto awooda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyadoona dowladda Mareykankane ay horay u sheegtay in ay taageereyso in Soomaaliya laga qaado cunaqabatenta.